www.sapanasansar.com: ए एन एम एन बनभोज तथा भलिभल खेल कार्यक्रम २००९!
ए एन एम एन बनभोज तथा भलिभल खेल कार्यक्रम २००९!
गत सालको ब्लगिङ्ग हेर्न को लागी यहा क्लिक गर्नुहोस !
हरेक बर्ष जस्तै यो बर्ष पनि ए एम एम एन(एसोसियसन अफ नेप्लीज इन मिनिसोटा)ले बनभोज कार्यक्रम तथा भलिबल खेल कार्यक्रन भब्यताका साथ, गत शनिबार संपन्न गरेको छ। करिब २०० जोड को हाराहारी मा उपस्थीति जनाएका प्रभासी नेपाली परिवारले आफ्नो संस्कृती झल्कने खानेकुरा साथै नाचगान प्रस्तुत गरेका थिए ।
गत बर्षको भलिबल च्याम्पियन लाई पराजित गर्दै यो बर्ष को ए एम एम एन भलिबल च्याम्पियन सिप ट्रफि म आफैँ संलग्न उहेको समुह "तातो आलु"ले हात पारेको छ । यो बर्ष को भलिबल ट्रफिको लागी सात टिमले भिडेका थिए ।
सन २००९ को ए एम एम एन भलिबल च्याम्पियनसिप ट्रफि बिजेता समुह , तातो आलु
गत बर्षको बिजेता टोलि "नया नेपाल" , यो बर्ष उपबिजेता मा चित्त बुझाउनु परेको छ । यसै गरी यो बर्ष भाग लिने थप समुहमा : चौतारी,भोलेबाबा, बारुला,रातो भाले र फ्रि एजेन्ट पनि थिए ।
प्रस्तुत भनभोज कार्यक्रममा बिंगो खेल पनि खेलाईएको थियो । केटा केटि हरुको लागी बिशेष पुरस्कार पनि बितरण गरिएको थियो जस्ले गर्दा केटा केटि मा उत्साह जगाएको थियो ।
प्रस्तुत कार्यक्रमा का केहि भिडियो दृष्य तथा तस्वीर हरु यहा तल प्रस्तुत गरेको छु ।
भिडियो हरु तल टासेको छु ।
हस्त आज लाई यत्तिनै !
फैरी भेटौला !
Posted by सपनासंसार at Monday, August 17, 2009
Related Posts : अडियो-भिडियो , मेरो कलम , सुचना-समाचार
Labels: अडियो-भिडियो , मेरो कलम , सुचना-समाचार
Good job "tato Aalu team ! "
8/18/09, 2:09 PM
बधाइ छ तातो आलु। फाइनल हेर्ने अबसर नजुटे पनि तातो आलुको लिग गेम हेर्न अबशर जुटेको थियो। लहै लहैमा तातो आलु र बारुलो को भिडियो पनि खिचेको थिएं। भिडी राखौं कि नराखौं जस्तै भएको थियो खेल नै जित्ने भने पछि त भिडियो नराखी भएन।
लौ भिडीयो हेर्न दौंतरी ब्लग (www.dautari.org)पाल्नुहोला।
8/18/09, 6:04 PM
2009को ए एम एम एन भलिबल च्याम्पियन सिप ट्रफि गत बर्षको च्याम्पियन "नयाँ नेपाल" लाई पराजित गर्दै "तातो आलु" समूहले हात पारेकोमा तातो आलु समूहका खेलडी भाईहरुलाई हार्दिक बधाई छ ।
8/18/09, 6:37 PM
Thank you for the video and picture .
Good job sapanasansar
8/19/09, 6:45 AM